“Ronaldo waxaa Yaraantiisa lagu naaneysi jiray OOYAAYE.”. – Gool FM
“Ronaldo waxaa Yaraantiisa lagu naaneysi jiray OOYAAYE.”.
Byare March 29, 2017
(Madeira) 29 Mar 2017. Ricardo Santos oo ay Ronaldo ka soo wada ciyaareen kooxda ciyaal xaafadeedka CF Andorinha ee ka dhisnayd magaalada Madeira ee dalka Portugal ayaa daaha ka rogay Naaneys Yaab leh oo loogu yeeri jiray Cristiano Ronaldo.
Laacibka Real Madrid ayaa yaraantiisa lagu naaneysi jiray ‘Ooyaaye’ maadaama uu aad u caroon jiray markii aan kubbada loo soo baasin isaga.
Ronaldo aabihii ayaa waqtigaa ka shaqeynayay maaliyadaha iyo agabka kale ee ciyaartoyda kooxda CF Andorinha, laakiin taa kama hor istaagin in Ronaldo loogu yeero naaneystan yaabka leh.
“Ooyaaye, haa, maxaa yeelay Ronaldo kol horeba wuxuu jeclaa inuu guuleysto sida maanta uu u jecel yahay oo kale, Wuu ooyi jiray marka uu guul darreysto iyo marka ay caruurta kale kubbada u soo baasi waayaan,” Santos ayaa sidaa u sheegay Reuters.
Laakiin rabitaanka Ronaldo ee ahaa inuu guuleysto ayaa miro dhalay wuxuuna heystaa iminka waayo ciyaareed oo ifaya isagoo ku guuleystay Champions League saddex jeer, Euro 2016 ayuuna la qaaday xulkiisa xagaagii la soo dhaafay.
Afar horyaal ayuu ku guuleystay waayihiisa ciyaareed isagoo sidoo kale afar jeer gacanta ku dhigay abaal marinta laacibka ugu fiican adduunka.
Cristiano Ronaldo oo hadalo ka soo jeediyay xafladda furitaanka garoonka Dayuuradeed ee loogu magac daray...+SAWIRRO
Arsenal oo 50 Milyan oo Gini ku iibinaysa Sanchez haddii ay ku guuldarreysato inay heshiis cusub la saxiixato